Loan Officer - Kawhmu | Hayman Capital Co., Ltd. ﻿
2.5.2022, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services
ကုမၸဏီ: Hayman Capital Co., Ltd.
Hayman Capital is an investment company based in Singapore and now expanding Myanmar for establishing Microfiance Institution ( MFI ). To be the leading capital company, delivering world-class service through the blending of state-of-the-art technology and visionary management in partnership with competent and committed staff, to achieve sound financial health with sustainable value addition to all our stakeholders. We are committed to do this mission while ensuring the highest levels of ethical standards, professional integrity, corporate governance and regulatory compliance.NANA
• ဝန်ဆောင်မှုရယူလိုသူများနှင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရမည်။
• ဈေးကွက် ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ချေးငွေနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲသူထံသို့ ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
• ချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်း၊ မိမိတာဝန်ယူထားသည့်အဖွဲ့များမှ ချေးငွေပေးဆင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက အချိန်မီပြန်လည်ရယူရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းမျာကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
• ချေးငွေ လက်ခံထားသူများ၏ တိုးတက်မှု့ကို စဉ်ဆက်မပြတ်အကဲခတ်၍ အကြံဉာဏ် ပေးနိုင်ရမည်။
• လုပ်ငန်း၏ တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာအရာရှိထံ သတင်းပေးပို့နိုင်ရမည်။
• ချေးငွေ ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
• ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတက်ပြီး Microsoft Word နှင့် Excel အသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရမည်။
• အသေးစားချေးပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂ နှစ်) ရှိသူဦးစားပေးမည်။
• မြန်မာဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ အသင့်အတင့် ရေးတတ် ပြောတတ်ရမည်။
• နေရာသေသမရွေးသွားရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရပြီး ချမှတ်ထားသည့်နေရာများတွင် တစ်ဦးတည်းလွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
• ချမှတ်ထားသည့် နေရာများတွင် တစ်ဥိးတည်း Marketing ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီပြီး အသက် ၃၀ မကျော်သူဖြစ်ရမည်။
• ၇၅ % ရုံးတွင်းပြင်ပတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
အလုပ္တည္ေနရာ No.4/D, 2nd ward, Corner of Yankin Main Road & Yan Aung 7th Street,Yankin Township, Yangon, Myanmar
ေနရာေဒသ: Sagaing Region
64 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services
Loan Officer - Kawhmu Sales & Marketing Jobs Human Resources Management and Development a) Manage and control branch staff proper qualificati Jobsinyangon Hayman Capital Microfinance Co,Ltd Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Financial Services ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ရွိအလုပ္မ်ား
Sagaing Region 615 ေန႔မ်ား
Sagaing Region 719 ေန႔မ်ား
Yangon (Rangoon) 542 ေန႔မ်ား
Mon State 615 ေန႔မ်ား
Yangon (Rangoon) 678 ေန႔မ်ား
Yangon (Rangoon) 679 ေန႔မ်ား
Yangon Region 690 ေန႔မ်ား
Yangon (Rangoon) 707 ေန႔မ်ား
Mandalay Region 719 ေန႔မ်ား
Yangon (Rangoon) 722 ေန႔မ်ား
IT Support Officer (Level 1 & 1.5)